प्रदेश २ः ब्याचलर गरेर मात्र बिबाह गरेमा सरकारले छोरीलाई ५१ हजार रुपैयाँ दिने
यस्तै एसइईमा उत्कृष्ठ अंक ल्याई उतिर्ण हुनेलाई २५ हजार नगद र सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ८मा अध्यायनरत सबैलाई छात्रालाइ साईकल प्रदान गर्दै आएको छ ।
२०७७ चैत ११ बुधबार
बिहान १०:२२ बजे
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर २ को एक स्थानीय सरकारले छोरीलाई ब्याचलर (स्नातक) उतीर्ण गरी मात्र बिहे गरे ५१ हजार रुपैयाँ दिने घोषणा कार्यन्वयनमा ल्याएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ को बारा जिल्ला स्थित प्रसौनी गाउँपालिकाले घोषणा गरेको छोरीको ब्याचलर (स्नातक) शिक्षापछिको बिहे योजना अन्तर्गत एक छोरीलाई ५१ हजार रुपैयाँ दिएको हो ।
सो गाउँपालिकाभित्रका छोरीहरुले ब्याचलर पास गरी बिहे गरेमा पुरस्कार र सम्मान स्वरुप ५१ हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको हो । सोही योजना अन्तर्गत सोमबार एक जनालाई रकम हस्तान्तरण गरेको हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष भोला प्रसाद गुप्ताले सोमबार साँझ स्थानिय एक छोरीको विवाहमा सरिक भई पालिकाको तर्फबाट उल्लेखित रकमको चेक हस्तान्तरण गरी कार्यक्रमको सुरुवात गरेका हुन् ।
कार्यक्रम अनुरुप गाउँपालिका वडा नम्बर १ को मुस्लीमटोल बस्ने कलिम मिया मन्सुरीकी छोरी २५ बर्षिया असरिना खातुनलाई ५१ हजार रुपैंयाको चेक गाउँपालिकाले प्रदान गरेको छ ।
स्नातक उतिर्ण पश्चात सोमबार राती मन्सुरीकी छोरी असरिनाको विरगजंका नवजीव आलमसँग बिहेगाँठ हुने भएपछि साँझ उनको घरमा पुगेर अध्यक्षले सगुन स्वरुप ५१ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेका थिए ।
सोही विवाहको अवसरमा गाउँपालिका अध्यक्ष गुप्ताले उक्त रकम खातुनलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आएको कार्यक्रम अन्तरगत पुरस्कार पाउने असरिना पहिलो स्थानिय छोरी भएको गाउँपालिका अध्यक्ष गुप्ताले बताए ।
स्नातक गरेर आफ्नो खुट्टमा उभिएर विवाह गर्ने स्थानिय छोरीलाई शुभ सगुन स्वरुपम उक्त रकम हस्तान्तरण गरिएको अध्यक्ष गुप्ताले बताए ।
तराई मद्येशमा छोरीको शिक्षाप्रति जागरुप बनाउँदै छोरी बचाउ छोरी पढाउ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको हो । छोरीलाई उच्च शिक्षा दिन सके छोरीको सुरक्षा सकिने सन्देश दिनु कार्यक्रमको उदेश्य भएको अध्यक्ष गुप्ताले बताए ।
गाउँपालिकाले छोरीको शुरक्षा, शिक्षा र समग्र महिलाका पक्षमा गम्भीर रुपमा काम गरिरहेको छ ।
गर्भवती महिलालाई एकहजार रुपैंया पोषण भत्ता, आयोडिन यूक्त नुन, छोरी जन्मउँदा २ हजार स्याहार खर्च, सामुदयिक विद्यालयको ८ कक्षमा उत्कृष्ठ अंक ल्याउनेलाई ५जनालाई जनपह ५ हजार नगद दिने कार्यक्रम छ ।
प्रदेश नम्बर २ सरकारको “बेटी पढाउ, बेटी बचाउ” कार्यक्रमको परिकल्पना गर्ने उक्त पालिकाले २०७४ मा दश हजार जम्मा गरि २० बर्षपछी १ लाख दिने कार्यक्रम लागु गरेको थियो ।
सोही कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले अपनत्व लिँदै छोरी पढाउ छोरी बचाउ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
त्यस कार्यक्रम अन्तरगत प्रदेश २ सरकारले २०७६ माघ यता जन्मीएका छोरीको १ लाख रुपैयाँको विमाका साथै सामाुदायकि विद्यालयको कक्षा ८ माथीका छात्रालाई बर्सेनी साईकल वितरणसमेत गर्दै आएको छ ।
सोमबार शुभसगुन स्वरुप ५१ हजार रुपैंया पुरस्कार हस्तान्तरण कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष गीता साह,वडाअध्यक्ष बैजु गुप्ता,आनन्द कुमार गुप्ता,स्थानिय शिक्षक एवं सामाजिक अगुवा निप्पु गुप्ता लगायतको सहभागिता रहेको थियो । एकप्रियाडकटमा पत्रकार पुष्पराज खतिवडाले समाचार लेखेका छन् ।
प्रादेशिक अस्पतालमा विरामीको लागि खानाको माग गरेका होइनौ : निमित्त मेसु डा. यादव
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा कुनै सँस्थासँग खानाको लागि माग नगरिएको प्रष्टोक्ती अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रमोद यादवले दिएका छन् । गत २४ गतेको एक पत्र अनुसार, प्रादेशिक
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा कुनै सँस्थासँग खानाको लागि माग नगरिएको प्रष्टोक्ती अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रमोद यादवले दिएका छन् ।
गत २४ गतेको एक पत्र अनुसार, प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत कोभिड सँक्रमितहरुको लागि खानाको व्यवस्था गरिदिनको लागि अनुरोध पत्र लेखिएको बारेमा चौतर्फी आलोचना भएपछि डा. यादवले सोको स्पष्टोक्ती दिएका हुन् ।
आईतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै खानाको लागि पत्राचार गरेको स्वीकार गर्दै मनकारी सँस्था मारवाडी युवा मँचले पहिले खाना खुवाउने ईच्छा देखाएपछि सोको प्रतिउत्तरमा सहमति मात्र दिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
मारवाडी युवा मँच जनकपुरका महासचिव राहुल सिँघानीयाद्धारा लिखित बैशाख २४ गतेको अनुरोध पत्रानुसार मात्र अस्पताल प्रशासनले खाना खुवाउने सहमति दिएको स्पष्टोक्ती दिएको हो ।
गत विहिबार मात्र प्रदेश २ का सरकारले अस्पतालमा विरामी हेरचाहको लागि ९० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको उल्लेख गर्दै अस्पतालमा उपचार र खानामा कुनै प्रकारको त्रुटी नहुने प्रतिवद्धता समेत डा. यादवले जाहेर गरेका छन् ।
प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा सँचालनमा रहेको कोभिड विशेष अस्पतालमा अहिले १८ वटा भेन्टिलेर, २५ बेडको एचडियू सहित ६३ बेड सँचालनमा रहेको जानकारी समेत सोही विज्ञप्ति मार्फत दिएका हुन् ।
उनका अनुसार, अस्पतालमा माग गरेको अनुसार जनशक्ति सहित आवश्यक सेवा सुविधा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको तथा चाहेको बेला जस्तोसुकै सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा मुख्यमन्त्रीले सम्पूर्ण सहयोग समयमै हुने प्रतिवद्धता जनाएको उल्लेख छ ।
यसअघिको पत्रमा मारवाडी युवा मँचले पठाएको पत्रको जवाफ र सहमति मात्र दिएको भनेर नप्रष्टयाएका कारण सो पत्र समाजिक सँजालमा भाइरल बनेको हो । अघिल्लो पत्रमा खानाको लागि अनुरोध गरिएको आशय झल्किरहेको देखिएको छ ।
मारवाडी युवा मँचको पत्रानुसार अस्पतालले खानाको लागि सहमति मात्र दिएको भनेर प्रष्ट नभएको कारण चौतर्फी आलोचना समेत भएको हो । समाजिक सँजालमा कैयौं जनाले प्रदेश सरकारप्रति पनि प्रश्न तेर्साएका थिए ।
जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमाथप एक जनाको कोरोनाबाट मृत्यू
वीरगँजमा ७ कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु
कोरोनाबाट जनकपुरको प्रादेशिक अस्पतालमा एक महिलासहित तीन जनाको मृत्यू !